रुस र चीन : शुरुवाती जम्काभेटहरु - Nepal Readers
Home » रुस र चीन : शुरुवाती जम्काभेटहरु
in इतिहास, यो हप्ता, विमर्शका लागि, समाचार
रुसको चीनसँगको सम्बन्धको कथा इङ्गल्याण्ड–चीन सम्बन्धको वर्णन भन्दा वढी चाखलाग्दो छ र त्यसलाई सजिलै व्यक्त गर्न सकिन्छ । इङ्गल्याण्डसँगको सम्बन्धका बारेमा वर्णन गर्दा हामीले ध्यान एकाग्र पार्ने धेरै कम विषयहरू पायौं। सन् १८४०, १८५७ तथा १८५९ का युद्धहरूले, युद्धका रुपमा प्रभावकारी परिणामहरू दिन सक्षम सामग्रीहरू उपलव्ध गराए पनि अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको कोणबाट हेर्ने हो भने, तिनीहरूको उत्पत्ति एवं परिणाम दुवैका सन्दर्भमा, ती खासै उत्साहवर्ध्दक थिएनन्।
जहाँसम्म युरोपेली शक्तिहरूको कुरा छ, यी तीनवटा युद्धहरू कुनै पनि हिसावले कुनै खास नीतिका अङ्ग थिएनन्।
“अफिम युद्ध”, “तीर–धनुष युद्ध” र “पुनर्पुष्टी युद्ध”हरू एउटा खास समस्या समाधान गर्नका निम्ति शक्ति प्रयोगका निम्ति आकस्मिक एक्ला घटना थिए र यस रुपमा यसले ब्रिटिस सरकारको चीनसम्बन्धी नीति चाहे त्यो वास्तविक होस् वा काम चलाउको, सो बारे कुनै पनि संकेत दिंदैन।
यही सुपरिभाषित वा कम से कम काम चलाउ लक्षको अभावले नै इङ्गल्याण्ड तथा रुसको चीन नीतिको भिन्नता दर्शाउँछ। जहाँसम्म रुसको सम्बन्ध छ, उसको प्रष्ट र घोषित एसिया नीति छ, जुन करीव तीन शताव्दीको अवधिमा राजवंशको निरंतरतामा व्यवधानहरू एवं रुसको युरोपेली आकांक्षाहरूका कम प्राथमिकता प्राप्त अभियानहरूमा श्रोत–साधनहरूको व्ययका वावजुद, सुनिश्चित तथा निरन्तर रहेको छ।
चीनका सम्बन्धमा रुसका तात्कालीन महत्वकाङ्क्षाहरूका बारेमा पछि चर्चा गरिनेछ । अहिलेका लागि मेरो उद्देश्य, विगत देखि हालसम्मका रुस एवं चीनबीचका सम्बन्धका बारेमा संक्षिप्त रुपरेखा प्रस्तुत गर्नु मात्र हो। रुसको एसियामा विस्तारित हुने आम प्रवृत्तिका बारेमा केही प्रकाश नपारी यस विषयलाई राम्ररी प्रस्तुत गर्न सकिन्न।
जहाँ सम्म रुसको आम वैदेशिक सम्बन्ध विस्तारको कुरा छ, त्यसको मुख्य कारक तत्व उ सँग सधै राम्रो बन्दरगाहहरू नहुनु रहेको छ। यो एकमात्र परिस्थिति वरिपरि उसको आधुनिक इतिहासका घटनाक्रम घुमेका छन्। युरोपेली मामलाहरूका सम्पूर्ण गतिविधिहरू प्रत्येक वर्षका धेरै महिना वरफ जमी अवरुद्ध हुने रीगा र अर्चान्गेलका बन्दरगाहहरू अनुरुप ढालिएका छन् र भ्लादिभोस्तकका त्यस्तै अवरोधमूलक तत्वहरूले उसको एसियाको राजनीतिलाई प्रभावित पारेको छ।
युरोपमा सन्तोषजनक बन्दरगाह राख्ने रुसको चाहनाका परिणामले रुस–टर्कीका सम्बन्धहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । रुस–चीन सम्बन्धले रुसको प्रशान्त महासागरमा वरफ–हीन बन्दरगाह राख्ने विचारलाई प्रतिविम्वित गर्दछ।
रुसी एवं चीनियाँ फौज बीचको पहिलो प्रत्यक्ष भेटघाट
महान इभानका आदेशअनुसार ग्रेगोरी स्ट्रोगोनोफ तथा एरमाक टिमोफेभीचले टोवोल एवं इर्तीस नदीहरूबाट सिंचित देशमा प्रवेश गरे । तिनीहरुले सन् १८७९ मा त्यहाँका सबैभन्दा महत्वपूर्ण घुमन्तु जातिका प्रमुख कुचुम खानलाई पराजित गरे । यसपछिबाट नै युराल पर्वत श्रृंखलालाई छिचोल्ने रुसको अभियान थालनी भयो।
केही वर्ष भित्रै रुसीहरूले युरोप देखि प्रशान्त महासागरसम्म– सेनाका चौकीहरूको रेखा बनाउने सफलता हासिल गरे। तोवोलोस्क १५८७ मा, तोम्स्क १६०४ मा, याकुत्सक १६३७ मा र प्रशान्त महासागरको किनारमा १६३८ मा ओखोत्स्क स्थापना गरिए। ओखोत्स्कको स्थापना भएको केही वर्षपछि चीनियाँ भूमि हडप्ने काम रुसले शुरु गरेको थियो। याकुत्स्कका प्रथम गभर्नर पिटर पेत्रोभिचले आमुर नदीको किनारमा रहेका साह्रै राम्रो स्थानका बारेमा सुने । त्यसपछि उनले सन् १६४३ मा एक जना कुनै पोयारकोफको नेतृत्वमा एउटा अभियान दल त्यस नदी हुँदै पठाए। पोयारकोफको सो अभियान दल आमुर नदीको शिर देखि त्यो समुद्रमा मिसिएको दोभानसम्म ३ वर्ष सम्म यात्रा गरेर याकुत्स्कमा फर्केको थियो।
आमुर क्षेत्रहरूमा अर्को अभियान खाबारोफ नामका एक युवा रुसी अधिकारीले सन् १६४९ मा सम्पन्न गरे । डुंगाहरूमा वसी नदी मार्गबाट तल झर्दै गर्दा तिनीहरुले खाबारोफको टोलीले मंचुका घोडचडी सैनिक टुकडीलाई भेटे । त्यो टुकडी पेकिङमा पठाउन वार्षिक सौगातहरू जम्मा गरिरहेका थियो। यो घटना सन् १६५० को थियो र रुसी एवं चीनियाँ फौज बीचको पहिलो प्रत्यक्ष भेटघाट यही थियो ।
खाबारोफको टोलीका खानपीन/बन्दोवस्तीका सामान चाँडै सिद्धिए । यसकारण किल्ला निर्माण गरी वस्न तथा नदीको तल्लो भागमा बन्दोवस्तीका सामान हासिल गर्नका निम्ति वलियो टोली पठाउन आवश्यक भयो, त्यसै गरियो पनि । तर, उक्त परिस्थितिको फाइदा उठाई स्थानीय वासिन्दाहरूले तारतारका युद्ध सरदार इजिनेइका मद्दत लिएर उक्त किल्लामा आक्रमण गरे। यसकारण खाबारोफलाई नदीको माथिल्लो भागतिर लखेट्न सफल भए ।
यति बेला सम्ममा पूर्वी साइवेरियाका यी घटना क्रमहरूको खबर रुस पुगिसकेको थियो र जार एलेक्सिसले आमुर क्षेत्र कब्जा गर्ने निर्णय गरे । त्यसै अनुरुप, एउटा अभियानको नेतृत्व गर्न उनले राजकुमार इभान रोस्त्रोवस्कीलाई नियुक्त गरे । सन् १६५३ मा दिभित्री सिमोभियोफको नेतृत्वमा रहेको अगुवा रक्षक दल आमुर क्षेत्रमा पुग्यो । खाबारोफ जेया नदीको मुखमा भेटिए । उनी र सिमोभियोफ दुवैले ओनफ्राई स्टेपानोफलाई एउटा सानो फौजको उत्तरदायित्व सुम्पे । त्यसपछि तुरुन्तै जारलाई यथार्थ स्थिति अवगत गराउन मस्कोतिर हानिए। खाबारोफ र उनको टोली मस्को पुगुन्जेलसम्ममा, जारको योजनामा परिवर्तन भइसकेको थियो र रोस्त्रोवस्की अभियान त्यसै सेलायो।
तर मैदानमा रहेको स्टेपानोफले आफु पुग्न सक्ने जति ठाँउलाई रुसमा मिलाउने अभियान जारी राखे तर यसै अभियानका क्रममा लडाइँका मैदानमा उनी र उनको टोली अधिकांश व्यक्तिहरू सन् १६५८ मा मारिए।
सन् १६५८ पछिका एघार वर्ष आमुर क्षेत्र रुसीहरूको घुसपैठबाट मुक्त रह्‍यो । तथापी सन् १६६९ मा साइवेरियाको एकजना कुनै चेरिङ्गोवस्की नाम गरेको एक सजायप्राप्त अपराधीले कैदीहरूको एउटा सानो दस्ता तयार गर्‍यो। जुन दस्ताले जेल तोडी भागेर स्वतन्त्रताको सास फेर्न सफल भयो । रोग, भोक तथा मनमुटावले ग्रस्त भई अझ सानो भएको उक्त टोली अन्त्यमा आमुर क्षेत्रमा पुग्यो र त्यहाँ तिनीहरूले अल्वाजिन नाम गरेको वस्ती वसाले।
चेरिङ्गोवस्की एउटा चतुर खेलाडी थियो। उसका विगतका अपराधहरूमा आम माफी पाउने सबैभन्दा राम्रो आशलाग्दो उपाय आमुर क्षेत्रमा रुसी हितहरूको प्रर्वद्धन गर्नु हो भन्ने कुरा उसले बुझ्यो। त्यसै अनुरुप, उसले अल्वाजिन वरिपरिका स्थानीय वासिन्दाहरूसँग कर उठाई त्यसलाई नियमित रुपमा नेरचिन्स्क पठाउन थाल्यो। त्यसको परिणामले उसले आशा गरेको जस्तै भयो उसले माफी पायो। सन् १६७१ मा नेरचिन्स्कका गभरनरले अल्वाजिनको वस्तीलाई औपचारिक मान्यता प्रदान गरे। यी सबै कुराहरू थाहा पाएर जार एलेक्सिस्ले २००० रुवल इनाम सहित चेरिङ्गोवस्कीलाई माफीनामा पठाई दिए।
जति समय वित्दै गयो, रुसी विस्तारवादीहरूका मनमा पूर्वी साइवेरियाको मामलाले क्रमिक रुपमा महत्वपूर्ण ठाँउ ओगट्तै गयो र सन् १६७५ मा सीमा क्षेत्रका मामलाहरूका बारेमा चीनियाँ अधिकारीहरूका विचारहरू वुझ्नका निम्ति निकोलस स्पाफरिकलाई मस्कोबाट पेकिङ् पठाइयो । त्यहाँ उनले आफ्नो अनुकूलको सकारात्मक आश्वासन भन्दा अलिकति मात्र नराम्रो कुरा प्राप्त गरे र त्यो थियो सकारात्मक रुपको प्रतिकूल आश्वासन । आमुर क्षेत्रलाई चीनियाँ भूभाग मानिनु पर्ने र आमुर लगायत त्यस क्षेत्रका ठूला नदीहरूमा जहाज चलाउने अधिकार चीनियाँ जनताको मात्र हुनु पर्ने कुरा चीनियाँहरूले गरे ।
स्पाफरिकको राजनयिक यात्रा र नेरचिन्स्कको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको समयको बीचको १४ वर्षको अवधिमा आमुर क्षेत्रमा प्रसस्त भिडन्तहरू भए । सन् १६८५ मा १८,००० चीनियाँ सैनिकहरू रहेको टुकडीले अल्वाजिनमा आक्रमण गर्‍यो र रुसीहरूलाई पछि हटी नेरचिन्स्कमा शरण लिन बाध्य पारियो । त्यस लगत्तै अर्को वर्ष, रुसी जर्नेल तोल्वुसिनले उक्त शहर पुनः कब्जा गरे। रुसी र चीनियाँ सरकारहरू सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रहरूका बारेमा वार्ता गरिरहेको खवर जब त्यस क्षेत्रमा केही महिना पछि पुग्यो, चीनियाँहरूले झण्डै पुनः त्यसलाई कब्जामा लिए तर त्यसपछि भने मुठभेटहरू मत्थर भएर गए ।
सन् १६८५ मा जार एलेक्सिस्ले साइवेरियन सीमा क्षेत्रका सम्बन्धमा चीनसँग सम्झौता सम्पन्न गर्नका निम्ति, राजकुमार फेदोर एलेक्सीएभीच गोलोभिनलाई चीन पठाउने भए । सो अख्तियारी प्राप्त असाधारण राजनयीक मस्कोबाट हिड्ने कुराको जानकारी गराउन दुई जना राजनयीक, निकिफोर भेनकाउफ तथा इभान फाफारोफलाई चीन पठाइयो।
राजकुमार फेदोर एलेक्सीएभीच गोलोभिनले जनवरी १६८६ मा मस्कोबाट यात्रा प्रारम्भ गरे । ती राजकुमार सम्झौता सम्पन्न गर्नका निमित्त अत्यन्तै अनुपयुक्त र क्षमताहीन थिए । धेरै कुराहरूमा राजाका निर्देशनहरूलाई उल्लङ्घन गर्दै तथा बाटामा धेरै समय व्यर्थमै खेर फाल्दै उनी अगस्त १६८९ मा नेरचिन्स्क पुगे ।
त्यहाँ उनले चीनियाँ आयुक्तहरूका रक्षक दलका नाममा ठूलो संख्यामा चीनियाँ सैनिक उपस्थिति सहितको दललाई भेटे । ती आयुक्तहरू सोफानलान्या र किउ किज्यु थिए । ती सैनिकहरू आयुक्तहरूको रक्षा गर्न मात्र नभएर, ‘‘…आई परेमा आयुक्तहरूलाई आफ्ना मागहरूको पूर्तिका निम्ति शक्ति प्रयोग गर्न सघाउन चीनियाँ सम्राटको आज्ञा पालन गर्न समेत तम्तयार थिए।’’
यहाँ के कुरा चाखलाग्दो छ भने नेरचिन्स्कको सम्झौताका सबै प्रक्रियाहरू लेटिन भाषामा सञ्चालन गरिएका थिए । चीनियाँ आयुक्तहरूलाई उक्त सेवा लामो समयदेखि पेकिङ्‍मा वसोवास गरिआएका क्रिस्चियन धर्मका पादरीहरू जेरविलोन र परेराले प्रदान गरेका थिए।
जुन परिवेशमा नेरचिन्स्कको सम्झौता भयो, त्यसले आमुर क्षेत्रमा रुसका पक्षमा कुनै पनि प्रकारका दावाहरूमा सकारात्मक फैसला हुने सम्भावनालाई समाप्त पारिदियो र गोल्भिनका सामु जे जति प्राप्त हुनसक्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्नुका अलावा कुनै उपाय रहेन किनभने आफ्नो भन्दा धेरै शक्तिशाली चीनियाँ सेनाका विपक्षमा सैनिक कारवाही गर्नसक्ने स्थिति थिएन ।
चीन र कुनै पनि पश्चिमा शक्ति बीचको पहिलो नेरचिन्स्कको सम्झौतामा अगस्त २७, १६८९ मा हस्ताक्षर भयो। यस सम्झौताका प्रावधानहरूले चीनियाँ साम्राज्य र साइवेरिया बीचको सीमाना छुट्यायो । रुसले अल्वजीनको किल्ला भत्काउन तथा त्यस वस्तीमा वसोवास गरिरहेका रुसीहरूलाई रुसी भूभागमा सार्न र “आज पर्यन्त त्यहाँ जे जे भएका थिए तिनलाई सधैका लागि त्याग्न” मञ्जुर गर्‍यो।
काउन्ट निकोलस मुराभिएफको रुसी अभियान
काउन्ट निकोलस मुराभिएफ पूर्वी साइवेरियाको गभरनर जनरल नियुक्त भए । त्यसपछिको सन् १६८९ देखि सन् १८४७ को अवधिमा रुसले आमुर क्षेत्रमा कुनै पनि आक्रामक गतिविधि गरेन । पूर्वी भूभागमा विस्तार गर्ने उसको नीतिमा कुनै पनि खाले विराम भने लागेको थिएन, तर उ आफ्ना गतिविधिहरू मध्य–एसियामा विस्तार गर्न व्यस्त रह्यो, जहाँ खान्तेस तथा तुर्कमेनियामा आधिपत्य जमाउन र पर्सियासँगका लडाइँहरूमा केन्द्रित रहन रुसी राजनेताहरू व्यस्त रहे । यो स्थिति जार निकोलसले मुराभिएफलाई नियुक्त नगरुन्जेलसम्म कायम रह्यो।
नियुक्त भएको पाँच वर्षसम्म, रुसी विदेश मन्त्री काउन्ट नेसेलरोदको सुदूर पूर्वमा विस्तारको विरोध गर्ने नीतिका कारणले मुराभिएफका हात बाँधिएका थिए । तर सन् १८५१ मा जारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै हस्तक्षेप गरे र यी युवा गभरनर जनरललाई आफ्नो पूर्ण समर्थन दिए । यसरी नेसेलरोद आफ्नो बाटोबाट हटेपछि, मुराभिएफ आफुले होसियारीपूर्वक तयार गरेको योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा लागे र ओखोत्स्कको सानो सामुद्रिक फौजको नेतृत्व गरिरहेका क्याप्टेन नेभेल्सकोइसँग मिलेर उनले धेरै प्रगति गरे । नेभेल्सकोइले सन् १८५० मा आमुर क्षेत्रमा निकोलाइफ्स्क शहर बसाए र त्यस पछिका केही वर्षहरूमा चीनका सम्राटको भूमि भनी स्वीकारिएका ठाँउहरू – दे कास्त्रीज खाडी, किजी ताल, अलेक्सान्द्रोभ्स्क र मारिइन्स्कमा चौकीहरू धमाधम स्थापित गरिए।
आफ्नो नियुक्ति भएकै दिन देखि मुराभिएफले आमुर क्षेत्रलाई हडपी छाड्ने दृष्टिकोण लिएका थिए भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन तर उनले अपनाएका योजनावद्ध तौरतरिकाहरू कार्यान्वयन गर्नका निम्ति आवश्यक हस्तक्षेपको उचित मौका उपलव्ध भएन । त्यसकारण के कुरा अन्दाज गर्न सकिन्छ भने, जब क्रिमिया युद्ध शुरु भएका कारणले कालो सागरमा रहेको शक्तिशाली सामुद्रिक वेडा कामाचात्का जान असमर्थ भयो, आमुर क्षेत्रमा बन्दोवस्तीका सामान आपूर्ति गर्न बाध्य भएका मुराभिएफले चित्त वुझाएरै भए पनि आपूर्ति टोली त्यतातिर पठाए। आपूर्तिको लस्कर पठाउनु त्यसको रक्षाका निम्ति रक्षावाहिनी खटाउने एउटा राम्रो वहाना वन्यो र घटना क्रम यस किसिमले विकसित भयो कि त्यसले सशस्त्र गुप्तचरीको भूमिका निर्वाह गर्‍यो।
उक्त अभियान सिलिन्स्कबाट १४ मे १८५४ मा शुरु भयो, जसको नेतृत्व मुराभिएफ आफैले गरेका थिए । उक्त रक्षक दलमा करीव ८०० पैदल सैनिक, कज्याकहरूको एउटा फौजी दस्ता, र केही घोडचढी सैनिकहरू थिए । बन्दोवस्तीका सामान, हातहतियार तथा आपूर्तिहरू ७५ वटा डुंगाहरूमा लादिएका थिए र आर्गुन नामको एउटा वाष्प–चालित पानी जहाज, जसलाई त्यस अभियानका निम्ति भनेरै मुराभिएफले निर्माण गर्न लगाएका थिए, मिलेर त्यो टोली वनेको थियो।
एक हप्ताको यात्रा पछि, त्यो टोली अल्वाजिनको किल्ला रहेको स्थानमा पुग्यो, त्यो घडी संवेदनशील बनाउने खालको थियो र मुराभिएफ एवं उसका अधिकारीहरू जहाजबाट उत्रे र दुई शताव्दी अघि रुसी अग्रजहरूले वसोवास गरेको त्यस ठाँउमा घुँडा टेकेर प्रार्थना गरे । त्यस बेला फौजको सँगीत टुकडीले समवेदना धुन वजाएको थियो र बाँकि जवानहरूले टोपी झिकेर आफ्नो सम्मान व्यक्त गरेका थिए।
हामी, स्वभावैले, अरु राष्ट्रहरूको देशभक्ति वा राष्ट्रिय भावनाप्रति असहिष्णु छौ र यसरी अल्वाजीनमा मुराभिएफले गरेका नाटकीय कामको महत्वलाई खिल्ली उडाउन र त्यसलाई महत्व नदिन सक्छौ तर वास्तवमा यो एउटा नयाँ युद्धको शंखनादको संकेत भएको मनोवैज्ञानिक असर पार्ने घडी थियो ।
यस घडी देखि अघि वढ्दै जाँदा, मुराभिएफलाई भाग्यले साथ दियो । क्रिमियाको युद्धका मुठभेटहरू प्रसान्त महासागरसम्म फैलियो र फ्रान्स तथा इङ्गल्याण्डका संयुक्त फौजले पेत्रोपाभलोस्कका रुसी किल्लाहरूमा धावा वोले । पूर्वी साइवेरियाबाट आमुर क्षेत्र हुदै थप सैन्य शक्ति नपठाएको भए, पेत्रोपाभलोस्क संभवतः गुमिसकेको हुने थियो । त्यहाँ जे हुनु थियो त्यो भयो तथा संयुक्त सेना ठूलो नोक्सान बेहोर्दै त्यहाँबाट पछि हट्यो र रुसी जनताहरूले कालो सागरका विध्वंशहरूलाई प्रशान्त क्षेत्रका जीतहरूले धैर्यतापूर्वक पुर्ताल गरे।
मुराभिएफको आमुर क्षेत्रको योजनालाई सेन्ट पिटर्सवर्गमा रहेका उनका समकक्षीहरूले समेत दुरदर्शीतापूर्ण भनी लिएका त थिए तर पेत्रोपाभ्लोस्कको प्रतिरक्षाले चाँडै सबै के कुरामा सहमत भए भने आमुर क्षेत्रको नियन्त्रण रुसी विदेश नीतिको एउटा महत्वपूर्ण र अभिन्न अङ्ग हो।
अब घटना क्रमहरू चाँडै विकसित हुन थाले । चीनियाँ अभियानका लागि इङ्गल्याण्ड र फ्रान्समा भइरहेका तयारीहरूका बारेमा जानकार रुसी सरकारले सन् १८५६ को अन्त्यतिर एडमिरल काउंटलाई मन्त्रीका रुपमा चीन पठायो । काउंट पुटियाटिनले स्थल मार्गबाट यात्रा प्रारम्भ गरे र इरकुत्स्कमा उनको भेट मुराभिएफसँग भयो, जो सँग उनले सुदूर पूर्वमा रुसका नीतिहरूका प्रश्नका बारेमा वृहद छलफल गरे । ती दुबै आ–आफ्ना काममा निमग्न भए।
उनीहरूले गरेका प्रयत्नहरूको फललाई, मुराभिएफले १६ मे १८५८ मा हस्ताक्षर गरेको ऐगुनको समझदारी–पत्र तथा पुटियाटिनले जून १, १८५८ मा हस्ताक्षर गरेको तियन्त्सीनको सम्झौताले, प्रतिनिधित्व गर्दछ । समझदारी पत्र अनुसार रुसले, आमुर नदीको उद्‍गम देखि उसुरीसम्म त्यस नदीको देव्रे पट्टीका संपूर्ण भूभाग तथा उसुरी देखि समुद्रसम्म नदीका दुवै किनारा सुरक्षित गर्‍यो। समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको केही दिन पछि, प्रार्थना–सभाको आयोजन गरियो र फौजी टुकडीहरूको कवाज प्रदर्शन गरियो । यस अवसरमा मुराभिएफले यसो भने –“कमरेडहरू ! म तपाईंहरूलाई वधाइ दिन्छु! हाम्रो मेहनत व्यर्थ गएको छैनः आमुर क्षेत्र अब रुसको भयो ! पवित्र अर्थोडोक्स चर्चका प्रार्थना तथा रुसको धन्यवाद तपाईंहरूकै निम्ति हो । सम्राट अलेक्जेन्डर द्वितीय अमर रहुन् र उनको संरक्षकत्वमा यो नयाँ विजित भूमि फलोस् फूलोस् !
हुर्रे !” आमुर क्षेत्रमा उनले पुर्‍याएको कदर स्वरुप मुराभिएफले काउंट आमुर्स्कीको पद पाए।
अर्को तिर काउंट पुटियाटिनले १३ जून १८५८ मा तियन्त्सीनमा व्यापार सम्झौता गर्ने सफलता हात पारे तर यी दुवै वटा राजनयिक सफलताहरू, जनरल इग्नातिएफले चीनलाई पेकिङ्–सम्झौतागर्न बाध्य वनाए पछि ओझेलमा परे। पेकिङ्–सम्झौतामा २० जुलाइ १८६० मा हस्ताक्षर भएको थियो।